Tia vola hoe ny tovovavy? – Malag@sy Miray
Lahatsoratra iray tamin’ny gazety mpivoaka isan’andro eto Andrenivohitra no somary nanaitra ka nahatonga ny tena hividy dia hamaky. Tao anatin’izany lahatsoratra izany no nahitana fa misy tovovavy amidy etsy Analakely ary tsy ireny tovovavy mijorojoro ireny akory fa toy ny entam-barotra amidy ambongadiny.
Vinaky tamin’izany fa mitentina 2 tapitrisa ka hatramin’ny 7 tapitrisa Ariary ny vidin’ny iray ka mpanera no tena manatanteraka. Vao omaly koa no nisy nitantara fa ny zoma alina dia misy lanonana somary hafahafa mitranga eto an-drenivohitra. Hafahafa satria dia misy ireo mpanambola no miangona amin’ny toerana iray dia mandray lavantim-behivavy. Ireto vehivavy ireto dia mitanjaka tanteraka ka ny vahiny sy ireo zanaka malagasy manamanana no mijery sy mamandrika amin’izy ireo.
Tato ho ato koa dia nalaza itony mpivaro-tena lafo vidy na « pute de luxe » araka ny filaza azy ka izay mahasahy ambony no mahazo ny tsara. Zavatra efa nisy foana moa ireo raha ny sihosihon-dresaka saingy niafina ka tsy dia nivoaka ny resaka saingy noho ny tsy fisiana amin’izao fotoana dia maro ireo tovovavy avy amin’ny kilasy antonontonony na ambony koa aza saingy tsy nahavita fianarana no mirohotra manao izany ka mampalaza ny resaka. Misy aza tovolahy tafiditra amin’ireo vidina…
Mahamenatra! Mamoa-fady! Manambany ny soatoavina mahamalagasy ny fisian’izany zavatra izany. Mampahatsiahy ny tena ny tantaran’i Sodoma sy Gomoro ao anaty Baiboly ka nanapotehin’Andriamanitra ireo tànana ireo. Tsy nisy intsoy ny olo-marina…
Raha mijery ny manodidina aho dia betsaka ny mivavaka be, mitory teny etsy sy eroa, manana tranokala evanjelika. Dia manontany tena hoe tena amin’ny fony ve ireny sa fombafomba ivelany sa sanatria mpangalatra akoho alatsinainy nefa mpivavaka ny alahady? Tsy dia misy idirakoo ny amin’izay fa ny fanontaniana miverimberina an-tsaina dia ny hoe maninona no misy krizy eran’izao tontolo izao? Maninona no faizina ohatra izao koa ny malagasy? Feno fahotana sy feno loto ve ka mila kapohina mba ho tonga saina? asa re, tsy haintsika ny momba izany.
10 juillet 2009 à 18:09
Tara be ianao, sary mihetsika efa niverimberina foana io.Amin’ny teny vazaha mis ilay filaza hoe « la fin justifie les moyens », mandrovon-tsihy no mety ho andikako azy, misy tena tafa nefa misy (ny ankamaroany) tsy lasa lavitra akory. Mety kivy be ianao fa izao angamba vao nahita kanefa ny tenako dia mahita fa na dia manao ny ataony aza ny olona sasany dia mbola misy ihany koa ireo mitana ny maha izy azy (éthique sy môraly) na dia eo aza ny fahasahiranana.
Avelao ireny hanao izay ataony any eh !!! tazony ny maha izy anao.
Momban’ny fivavahana vakio: http://nymarina.wordpress.com , ny hevitro.
Misaotra amin’ilay rohy (lien)
Tena gaga fotsiny aho fa tena efa mivaona ilay toe-tsaina manodidina. Indraindray mba manontany tena vetivety ihany hoe « dia ohatrinona koa anefa e?… » » Mba mahazo be sa bômbô sy sôkôlà no tambiny? » …